हे भगवान के यस्तो देख्नु परेकाे? आँखा अघि १४ महिना सम्म छोरा कुरेर बसेकि सासु बुहारी भुइमा ढले (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > हे भगवान के यस्तो देख्नु परेकाे? आँखा अघि १४ महिना सम्म छोरा कुरेर बसेकि सासु बुहारी भुइमा ढले (भिडियो सहित)
हे भगवान के यस्तो देख्नु परेकाे? आँखा अघि १४ महिना सम्म छोरा कुरेर बसेकि सासु बुहारी भुइमा ढले (भिडियो सहित)
admin July 8, 2019 Uncategorized	0
काठमाडौं । तपाईहरुले लाइट नेपाल अनलाईनमा एउटा भिडियो केही दिन अघि हेनुूभएको थियो होला । वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा छोराको उपचार गरेर बसेकी एक आमाले औषधी उपचार गर्ने पैसा नभएपछि चिकित्सकले परिक्षण गर्न दिएको रगत पनि डस्टविनमा फाल्ने गरेकी थिइन् । डाक्टरले रगत परिक्षण गर्न भन्दै छोराको रगत निकालेर दिन्थे तर परिक्षण गर्ने पैसा नभएपछि उनले छोराको रगत डष्टविनमा फाल्ने गर्थिन ।
१४ महिना सम्म वीर अस्पतालमा छोराको स्याहार सुसार गरेकी आमाले अहिले त्यो छोरा गुमाएकी छन् । कसैले आर्थिक सहयोग गरे छोराको उपचार गरेर निको बनाउने आशमा वीर अस्पतामा १४ महिना कुर्दा पनि उनले छोरालाई जिवित फर्काउन सकिनन् । अन्तत उनलाई छोडेर छोरा सधैंका लागि अस्ताए । विशाल बमले संसार छोडेर गएपछि उनको आमा र श्रीमती लक्ष्मीको बिचल्ली भएको छ । विशालको सानो सन्तान पनि टुहुरो भएकी छन् । हजुरआमा र आमा रोएको देखेर सो सानो बालिका पनि रोइरहेकी छन् ।
९ महिनाको नाती बितेको पीडा सेलाउन नपाउँदै छोराको अवस्था यस्तो भयो । त्यसपछि आफु पनि आगोमा पोलिइन् । रुखवाट लडेर हात खुट्टा समेत नचल्ने अवस्थामा अस्पताल ल्याइन् । श्रीमानले पनि सधैंका लागि छोडेर गए । श्रीमान बितेको पीडा भर्खर भुल्न खोज्दै थिइन् नाती पनि गुमाइन् । घरको आर्थिक अवस्था धान्दै आएको छोरा गाईभैसीलाई घाँस काट्न रुखमा चढ्दा रुखवाट लडेर मेरुदण्ड गुमाए ।
मुगुवाट ल्याएर काठमाडौंमा उपचारका लागि ल्याइन् । १४ महिनासम्म उपचार गरिन् तर अहिले छोरालाई पनि बचाउन नसकेपछि उनी एक्लिएकी छन् । बुहारी विधवा भइन् सानो नातिनी टुहरी भइन् ।अझै झन अब उनीहरुका लागि आर्थिक सहयोगको खाँचो छ । सासु, बुहारीको जिवन धान्न र नातिनीको भविष्यका लागि उनीहरुलाई आर्थिक सहयोगको खाँचो छ ।
टिप्परले ठक्कर दिएपछि ६ बर्षिय आयुशकाे दुःखद मृत्युपछि यस्तो दुर्दशा! – भिडियो सहित
भर्खरै मन्थली विमानस्थलबाट आयो तारा एयर विमान दुर्घटनाकाे दुःखद खबर
ज्वालामुखी चट्टान फोरेर यी व्यक्तिले बनाए यस्तो सुन्दर घर… हेर्नुहाेस्